Ndị juri ga-anụ okwu gbasara mwakpo mmekọahụ onye ọrụ ụgbọ elu America
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ndị juri ga-anụ okwu gbasara mwakpo mmekọahụ nke onye nlekọta ụgbọ elu America
Airlines • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Ndị juri ga-anụ okwu gbasara mwakpo mmekọahụ nke onye nlekọta ụgbọ elu America
.Jury ga-anụ okwu gbasara mwakpo mmekọahụ onye ọrụ ụgbọ elu America .
Ụgbọ elu America ada ada n'ịgbalị ịkwụsị nkwupụta mmeko nwoke na nwanyị nke onye ọrụ ụgbọ elu.
Mkpebi onye ọka ikpe Kimberly Fitzpatrick jụrụ akụkụ niile nke mkpesa maka nchikota ikpe nke onye America gbara nke chọrọ izere ikwe ka ndị juri nụ okwu a.
Edobere ikpe a na 342 yand Ụlọikpe mpaghara ikpe Jenụwarị 24, 2022.
Ikpe Kimberly Goesling gụnyere nkwupụta nke mwakpo mmekọahụ, nkata na mmegwara.
Onye na-eje ozi ụgbọ elu America nke kwuru na onye isi nri ama ama nke ụlọ ọrụ ụgbọ elu goro ya wakporo ya ga-enwe ohere ịkọrọ ndị juri akụkọ ya, na-agbaso isi mkpebi nke onye ọka ikpe mpaghara Tarrant County.
Mkpebi ahụ, nke Ọkaikpe Kimberly Fitzpatrick, jụrụ akụkụ niile nke mkpesa maka nchikota ikpe sitere n'aka. American ụgbọ elu nke chọrọ ka ọ ghara ikwe ka ndị juri nụ okwu ahụ. Edobere ikpe a na 342 yand Courtlọ ikpe mpaghara Jenụwarị 24.
"Nkwenye anyị na-abụkarị na mgbe ndị juri nọ na Fort Worth nụrụ okwu a wee nụ ihe mere onye ahịa m - na otú American si leghaara ya anya wee megwara ya ihe - ọ ga-eju ha anya," ka ọkàiwu Robert Miller nke Miller Bryant LLP na-ekwu. na Dallas, onye na-anọchite anya onye gbara akwụkwọ. " Naanị ihe anyị chọburu bụ ohere ịkọrọ ndị juri akụkọ anyị ma ugbu a anyị nwere ohere ahụ."
Onye gbara akwụkwọ n'okwu a bụ Kimberly Goesling nke Fort Worth, buru ụzọ kọọ akụkọ ihe mere ya n'ihu ọha - yana ọrụ ndị America na ya - na vidiyo Facebook na Instagram 2021 ruru ihe karịrị mmadụ 25,000.
Nwada Goesling, onye na-eje ozi ụgbọ elu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 30 American ụgbọ elu, nwere ndekọ ọrụ nke na-etinye ya n'etiti ụlọ ọrụ kachasị mma. Ọ bụ onye ndu ndị na-anya ụgbọ elu ma rụọ ọrụ n'òtù ndị mbanye na ọzụzụ nke ụlọ ọrụ ụgbọ elu. Ihe karịrị otu ugboro, ọ natara nyocha na-egbuke egbuke maka ịrụ ọrụ nke ọma, na-ebutekarị ọrụ pụrụ iche.
Na Jenụwarị 2018, otu njem dị otú ahụ kpọgara ya Germany, ebe ya na ndị ọrụ ụgbọ elu America ndị ọzọ, o nyere aka mepụta menu mba ụwa pụrụ iche maka ndị njem mbụ na nke azụmahịa.
Ọzọkwa na njem ahụ bụ onye isi nri a ma ama nke onye America goro n'ọrụ na-enweghị nyocha ndabere ma nọgide na-arụ ọrụ ọbụna mgbe ọ matara na ebubo mbụ e boro ya maka ịṅụbiga mmanya ókè na mmekọahụ na-ekwesịghị ekwesị, dịka ikpe ahụ si kwuo. N'abalị ikpeazụ nke ndị otu ahụ nọrọ, onye isi nri manyere ịbanye n'ọnụ ụlọ nkwari akụ Ms. Goesling wee wakpo ya n'ụzọ mmekọahụ. Nnyocha nke ndị America mechara gosi na o kwetara na ya mere mwakpo ahụ.
Mgbe ọ kọọrọ ụlọ ọrụ ahụ ọgụ ahụ, ndị isi na-ekwe nkwa na ha ga-akwụ Ms. Goesling ụgwọ maka ọgwụgwọ ma hapụ oge ya pụọ ​​​​na mgbanwe ọrụ, dịka ọ dị mkpa. Ha emeghị nke ọ bụla, kama wepụ ya n'ọkwá ọ na-achọsi ike n'òtù ndị ọrụ ụgbọelu.
Ikpe ya gụnyere nkwupụta nke mwakpo mmekọahụ, izu nzuzo na mmegwara. Ikpe ahụ bụ Kimberly Goesling v. American Airlines et al., Ihe kpatara Nke 342-314565-20 na Ụlọikpe Ikpe Ikpe nke 342 na Tarrant County.